Ngwongwo nke mbara igwe ọ ga-adị ọnụ ala? (emelitere maka 2021)
Ọnụahịa nke akụrụngwa anyanwụ agbadala site na 89% kemgbe 2010. Ọ ga-aga n'ihu na-adị ọnụ ala? Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ike anyanwụ na ume ọhụrụ, ọ ga-abụrịrị na ị maara na ọnụahịa nke teknụzụ na teknụzụ nke anyanwụ adaala nnukwu ego na nso nso a. Enwere ajụjụ di na nwunye tha ...
Ahịa Energy Energy - Uto, Tredị, Mmetụta COVID-19, na amụma (2021 - 2026)
Ike zuru ụwa ọnụ arụnyere ikike ịbụ 728 GW ma na-eme atụmatụ 1645 gigawatts (GW) na 2026 ma na-atụ anya na-eto eto na CAGR nke 13. 137% site na 2021 ruo 2026. Site na ọrịa COVID-19 na 2020, ahịa ike anyanwụ anaghị ahụ mmetụta ọ bụla pụtara ìhè. ...
Green Energy Revolution: Nọmba na-eme Sense
Agbanyeghi na mmanu ndi nwere mmanu mmanu emeela ka ha sie ike ma mezie ha n'oge a, ha bukwa ihe kacha enye aka na nsogbu ugbua. Agbanyeghị, ike ga-abụkwa isi ihe na - akpata ịnagide nsonaazụ mgbanwe ihu igwe: mgbanwe ọgbụgba ọkụ zuru ụwa ọnụ nke nsogbu akụ na ụba ya bri ...
Tinyere mmụba ọkụ eletrik na-arịwanye elu na mmetụta gburugburu ebe obibi na-adịghị mma anyị na-ahụ site na sistemụ okporo igwe anyị, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ mmadụ na-amalite ịhapụ isi mmalite ọdịnala nke ike ma na-achọ nrụpụta ntụkwasị obi maka ụlọ ha na azụmaahịa ha. Kedu ihe kpatara Beh ...
Gagharị na ike anyanwụ n'ọtụtụ buru ibu ga-enwe mmetụta dị ukwuu gburugburu ebe obibi dị mma. Otutu oge, a na-eji okwu gburugburu ebe obibi na-ezo aka na gburugburu ebe obibi anyị. Agbanyeghị, dịka ndị mmadụ, gburugburu anyị gụnyere obodo na obodo na obodo ndị mmadụ bi na ha. ...
Ngwongwo nke mbara igwe ọ ga-adị ọnụ ala? (emelitere f ...
Ahịa Energy Energy - Uto, ...dị ...
Mgbanwe Green Energy: Ọnụ Ọgụgụ Mee ...
Adress: Mba, # 31, Youshanmeidi Villa, Hexuli, Huli District, Xiamen, China
Mbara Igwe Iju Mmiri Solar, Mgbidi Mgbidi Igwe Mbara Igwe, Ọkụ Anyanwụ n'èzí, Solar Home Lighting Usoro, Solar Panel ọkụ, Solar Street Light osisi,